Kwame Nkrumah yɛ Gaanani a ɔyɛɛ amanyɔsɛm.
Na ne maame ne Elizabeth Nyanibah a na ɔfi Anɔna Ebusua mu. Ne papa nso ne Kofi Ngonloma a na ɔfi Asona Ebusua mu. Ɔwarre Helena Ritz Fathia Nkrumah Mumu-Ɔpɛnimba 31 afe 1958 mu. Ne mba yɛ ebiasa-- Francis Gokeh; Sarmiah Yarba na Sekou Ritz.
Kwame Nkrumah yε Ghana omanpanyin a odi kan. Ɔno na obuu yεn man no maa no yε keseε sεnea ete εnnε yi (Independence fawohodie wɔ 06.03.1957)
N'awo mu ne N'adesua[sesa]
Africa sane ba[sesa]
Mmara foforo yi annkɔ yie wɔ aborɔfo no hɔ, na wɔampene sɛ emu mmisae no bɛba mu. Eyi hyɛɛ Nkrumah abufuw na ɔtoo nsa frɛɛ nnwumakuw ne Ghanafo nyinaa sɛ wɔnfa asoɔden nhyia Britain mmra ne nhyehyɛe a wɔakyerɛw sɛ ɔman no nni so. Saa nti wɔsan kyeree Nkrumah kɔtoo fie ase mfe mmiɛnsa. Eyi hyɛɛ Ghanaman mma dodow ahoɔyaw na wɛkekaa wɔho kɔboaa CPP kuw noo tiaa Britain mmra a wɔahyehyɛw no. Na Nkrumah ne mpanyimfo dodow no wɔ fiease nso afei na nnipa pii ani abere kwan a aborɔfo no de ɔman no refa.
ɔmanpanyin Nkrumah yɛɛ nneɛma pii a ɛboaa Ghana nkɔsoɔ pa ara. Odii kan de Ghana nkyekyɛmu anan no nyinaa bɛyɛɛ biako na ɔsan hwɛɛ so yɛɛ ɔmanpanyin adwuma a wɔde ama no. Wosii sukuu, lɔrekwan, ayaresabea ne agyananbea dodow a ɛboaa sɛ Ghana mma asetena mu bɛyɛ mmerɛ. Saa mmere yi no, na amansan no ara frɛɛ Nkrumah sɛ ɔsagyefo, wɔ nea ɔbɔɔ mmɔden yɛ maa ɔman no ne emu nnipa nyinaa.
Ne asehwe, Asutware ne Wu[sesa]
Kwame Nkrumah Ndwuma[sesa]
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwame_Nkrumah&oldid=62344"
Nsesae ba kratafa yi so da 20 Ogyefuo 2022, mmere 18:28.